Fomba fandrefesana, fisorohana ary fampihenana ny tahan'ny fandaozana ny sarety miantsena | Martech Zone
Gaga foana aho rehefa mahita mpanjifa miaraka amina fizahana fizahana an-tserasera ary firy amin'izy ireo no nanandrana nanao fividianana avy tamin'ny tranokalany manokana! Ny iray amin'ireo mpanjifanay vaovao dia nanana tranokala iray izay nanambazany vola iray taonina ary dingana 5 ny miala amin'ny pejy fandraisana mankany amin'ny sarety fiantsenana. Fahagagana fa misy manao an'io hatreto!
Inona ny fialana amin'ny lisitry ny fiantsenana?
Mety ho toy ny fanontaniana tsotra izany, saingy zava-dehibe ny ahalalanao fa ny fialana amin'ny sarety dia tsy ny mpitsidika ny tranokala ecommerce-nao akory. Ny fandaozana ny sarety fiantsenana dia ireo mpitsidika izay nanampy vokatra ho an'ny sarety fiantsenana ihany ary avy eo tsy nahavita ny fividianana tamin'io fotoana io.
Ny fandaozana ny sarety fiantsenana dia rehefa manomboka manara-maso ny fizotran'ny filaminana an-tserasera ny mpanjifa mety hitranga nefa miala amin'ny dingana alohan'ny hamitana ny fividianana.
Mpividy maro no mizaha sy manampy vokatra amin'ny harona fiantsenana nefa tsy misy fikasana hividy. Mety maniry ny hahita sombiny kely fotsiny amin'ny vokatra izy ireo, na sanda fandefasana tombana, na daty fandefasana… misy antony marim-pototra mahatonga ny olona handao ny sarety fiantsenana.
Ahoana ny fikajiana ny tahan'ny fandaozana ny Carto
Ny raikipohy momba ny tahan'ny fandaozana ny Carto:
Ahoana ny fandrefesana ny fialana amin'ny lisitry ny fiantsenana amin'ny Analytics
Raha mampiasa Google Analytics amin'ny tranokala ecommerce anao ianao dia tsy maintsy fanaraha-maso ny ecommerce amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny mahita ny tahan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana sy ny antsipiriany ao amin'ny Conversions> Ecommerce> Fihetsika fiantsenana:
Mariho fa misy metrika roa samy hafa:
Fialana amin'ny sarety - mpivarotra ity izay nanampy vokatra tamin'ny sarety fa tsy nahavita ny fividianana.
Fandaozana ny fizahana - mpividy ity izay nanomboka ny fizotry ny fizahana fa tsy nahavita ny fividianana.
Misy teny hafa ihany koa ao amin'ny indostria:
Browse Abandonment - mpivarotra ity - matetika voasoratra anarana - izay nizaha ny tranokalanao fa tsy nanampy vokatra amin'ny sarety ary nandao ilay tranokala fotsiny.
Inona ny tahan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana antonony?
Mitandrema amin'ny eo ho eo isa amin'ny karazana statistika. Mety tsy hitovy amin'ny fahaizany ara-teknika, na ny fifandraisany, na ny fifaninananao ny mpanjifanao. Na dia zotram-pianarana tsara aza ity dia ho hitako kokoa ny fironana amin'ny tahan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana.
Salanisa manerantany - Ny taha salanisan'ny fandaozana ny sarety dia 75.6%.
Finday eo ho eo - 85.65% ny taha salanisan'ny fandaozana amin'ny telefaona finday.
Very ny varotra - Very hatramin'ny $ 18 miliara isan-taona ny vola azo avy amin'ny sarety fiantsenana nilaozana.
Inona avy ny tahan'ny fandaozana ny sarety fihenam-bidy isaky ny indostria?
Ity data ity dia nalaina tamina tranonkala ecommerce 500 mahery ary manara-maso ny tahan'ny fandaozana amin'ny sehatra lehibe enina avy ao Salescycle.
Finance - manana tahan'ny fahafoizan-karatra 83.6%.
Non-Profit - manana tahan'ny fahafoizan-karatra 83.1%.
Travel - manana tahan'ny fahafoizan-karatra 81.7%.
Antsinjarany - manana taham-pahafaham-bidy 72.8%.
Fashion - manana taham-pahafaham-bidy 68.3%.
lalao - manana taham-pahafaham-bidy 64.2%.
Fa maninona ny olona no mandao ny sarety miantsena?
Ankoatry ny antony ara-dalàna, misy zavatra azonao hatsaraina amin'ny traikefanao amin'ny fiantsenana hampihenana ny tahan'ny fandaozana:
Hatsarao ny haingam-pejy - 47% amin'ireo mpiantsena no manantena fa hametraka pejy web ao anatin'ny roa segondra na latsaka.
Lafo ny fandefasana entana - 44% ny mpividy mandao sarety noho ny vidin'ny fandefasana entana.
Famerana fotoana - 27% ny mpiantsena mamela sarety noho ny fahateren'ny fotoana.
Tsy misy fampahalalana momba ny fandefasana - 22% ny mpividy mandao sarety noho ny tsy misy fampahalalana momba ny fandefasana.
Ritra - 15% ny mpiantsena tsy hahavita hividy satria ny entana tsy ampy intsony.
Fampisehoana vokatra ratsy - 3% ny mpiantsena tsy hahavita hividy noho ny fampahalalana momba ny vokatra mampikorontana.
Olana amin'ny fikarakarana ny fandoavambola - Ny 2% amin'ireo mpiantsena dia tsy mahavita mividy noho ny olana amin'ny fikarakarana fandoavambola.
Manolotra ny paikadiko manokana aho, antsoina hoe ny Fitsapana 15 sy 50… Mahazo a 15 taona tovovavy ary 50 taona iray hividy zavatra amin'ny tranokalanao. Tandremo ny fomba nanaovan'izy ireo izany ary koa ny nahasosotra azy. Hahita taonina fotsiny ianao amin'ny fijerena azy ireo! Tsy azonao atao ny misoroka ny fandaozana tanteraka, fa azonao atao ny mampihena azy.
Ahoana ny fomba hampihenana ny fialana amin'ny fiantsenana fivarotana
Ny fanakianana mampihena ny sarety fiantsenana dia ny fandresena ny olana amin'ny fampisehoana, ny fampahalalana ary ny fahatokisana etsy ambony. Ny ankamaroan'izany dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny pejin'ny fizahana.
Performance - Fitsapana sy fanatsarana ny fahombiazan'ny pejy amin'ny birao sy finday. Aza hadino ny mametraka ny fitsapana ny tranokalanao ihany koa - maro ny olona no manandrana tranonkala iray izay tsy dia be mpitsidika akory… ary rehefa tonga daholo izy ireo dia rava ilay tranonkala.
Mobile - Hamarino fa ambony sy tsotra ny traikefanao finday. Ny bokotra mazava, lehibe sy mifanohitra amin'ny pejy tsotra sy ny fikorianan'ny fizotrany dia manakiana ny taham-pivoaran'ny finday.
Famantarana ny fandrosoana - asehoy ny mpiantsena anao ny dingana maro hamitana ny fividianana azy ireo mba tsy ho sosotra izy ireo.
Antso hiasa - Ny antso-to-hetsika mazava sy mifanohitra izay mitondra ny mpividy amin'ny alàlan'ny fizotry ny fividianana dia manakiana.
Fikarohana - fitetezana mazava izay ahafahan'ny olona miverina amin'ny pejy teo aloha na miverina miantsena nefa tsy very fandrosoana.
Product vaovao - manomeza antsipirihany maro, zoom, fampiasana, ary antsipirian'ny vokatra natolotry ny mpampiasa sy sary ka matoky ny mpiantsena fa mahazo izay tadiaviny izy ireo.
Vonjeo - manome nomeraon-telefaona, firesahana ary koa fiantsenana fanampiana ho an'ny mpiantsena.
Porofo ara-tsosialy - mampiditra porofo ara-tsosialy famantarana toy ny popup sy ny hevitry ny mpanjifa ary ny fijoroana ho vavolombelona matoky anao ny mpiantsena hafa.
Payment safidy - ampio ny fomba fandoavam-bola na ara-bola rehetra hampihenana ny olana amin'ny fikarakarana fandoavam-bola.
Badge fiarovana - manomeza marika amin'ny fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo izay ahafahan'ny mpiantsena anao mahalala fa manamarina ivelany ny tranokalanao ho fiarovana.
Fandefasana - manolora fomba hidirana kaody zip ary ahazoana ny fotoana sy ny vidiny fandefasana.
Mitsitsia ho avy eo - manolora fitaovana ho an'ireo mpitsidika hitahiry ny saretiny rehefa avy eo, ampidiro ao anaty lisitra faniriana izany, na mahazo fampahatsiahivana mailaka ho an'ny vokatra stock.
maika - manolora fihenam-bidy mifandraika amin'ny fotoana na tolotra fivoahana mba hampiakarana ny tahan'ny fiovam-po.
fisoratana anarana - aza mila fampahalalana bebe kokoa noho ny takiana amin'ny checkout. Manolora fisoratana anarana rehefa voamarina ilay mpiantsena, fa aza terenao mandritra izany.
Ahoana ny fomba hamerenana ireo karatra fiantsenana nilaozana
Misy sehatra automatique mampino sasany any izay misambotra sy mandefa mailaka an'ireo mpiangona voasoratra anarana ao amin'ny tranokalanao. Ny fandefasana fampahatsiahivana isan'andro amin'ny mpividy anao miaraka amin'ny antsipiriany momba izay ao anaty saretiny dia fomba iray lehibe ahafahan'izy ireo miverina.
Indraindray, ny mpividy dia miandry fotsiny ny hahazo karama mba hahafahan'izy ireo mamita ny fividianana. Ireo mailaka fitehirizam-bokatra nilaozana dia tsy spam, matetika manampy izy ireo. Ary afaka manao antso mahery amin'ny hetsika amin'ny mailakao ianao mba tsy hampahatsiahivin'ilay mpivarotra anao intsony io sarety io. Manoro hevitra izahay Klaviyo or Cart Guru ho an'ity karazana mandeha ho azy ity. Izy ireo aza dia manana mijery fandaozana ary fampahatsiahivana ivelan'ny tahiry amin'ny fizotrany mandeha ho azy!
Ity infographic avy amin'ny Monetate manana torohevitra tsara momba ny fanatsarana ny fizotry ny fizahana ary hampihena ny fandaozana ny sarety fiantsenana. Mampiasa ny teny hoe "misoroka" izay tsy inoako fa marina izy ireo. Tsy misy afaka tsy fandaozana ny sarety fiantsenana amin'ny tranokalan'ny ecommerce.
Tags: fandaozanaaza ilaozanamijery fandaozanafandaozana saretyfandaozana ny fizahanapejy fizahanafamolavolana pejy fizahanafizarana pejy fizahanae-varotraecommercesitrana ny fialana amin'ny sarety fiantsenanamampihena ny fandaozana ny sarety fiantsenanaharona fiantsenanafandaozana sarety fiantsenanastatistikan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana
22 Nov 2011 tamin'ny 12:50 PM
Tiavo ny plugin Buffer.
22 Nov 2011 tamin'ny 8:23 PM
Misaotra ny info.
Manaiky aho, mahagaga fa ny olona tsy “manandrana mahandro azy manokana” na mijery ny hafa manandrana mividy.
Ny teboka iray hafa tonga tao an-trano dia ny fanafenana ny boaty kaody fampiroboroboana. Matetika aho mandoa vola ary manandrana mitady kaody na mahita tranokala hafa misy vidiny ambany.
23 Nov 2011 amin'ny 8:17 maraina
Tiavo ny fitsapana 15 sy 50!
23 Nov 2011 amin'ny 9:48 maraina
Ve, tsy misy hevitra be lavitra noho ny 15 taona sy 50 taona 🙂